काठमाडौं, ०८ फाल्गुन: आइतवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात २५ दशमलव ५० अङ्कले बढेर १ हजार ३ सय ६९ दशमलव ३५ विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन बढिरहेको बजारको प्रवृत्ति हेर्दा नेप्से परिसूचकले प्रथम प्रतिरोध १ हजार ३ सय ८० विन्दुमा र दोस्रो प्रतिरोध १ हजार ४ सयमा पाउने सम्भावना देखाउँछ । पहिलो आधा घण्टामा १ हजार ३ सय २६ को न्यून विन्दुमा झरेको बजार त्यसपछि भने उकालो लाग्न थालेको हो । नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनीमध्ये १ सय ३ कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेको, ३१ कम्पनीहरुको मूल्य घटेको छ भने १० कम्पनी स्थिर रहेका छन् । दिनभरीमा १ सय ४४ कम्पनीको ६ हजार ८ सय २१ पटकको व्यापारबाट २० लाख ७७ हजार ५ सय ५६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
आइतवार बीमा समूहको परिसूचक ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सात बीमा कम्पनीहरुको शेयर मूल्य करीब १० प्रतिशतले बढेको छ । साथै, अरु चार कम्पनीहरुको शेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो । ‘अन्य’ समूहको परिसूचक ३ दशमलव ५९ प्रतिशत बढेको छ । जलविद्युत लगानीको शेयर मूल्य घटेपनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको मूल्य रू. २९ ले बढेपछि यस समूहको परिसूचक बढ्न टेवा पुगेको हो । साथै, वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक ३ दशमलव ३९ प्रतिशत, विकास बैङ्कको २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, बैङ्किङको १ दशमलव १ प्रतिशत र जलविद्युतको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत बढेको हो । सोल्टी होटल र ओरियण्टल होटलको शेयर मूल्य घटेपछि होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव ११ प्रतिशत घटेको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १६ प्रतिशत घटेको छ । बैङ्क अफ काठमाडौंको रू. ३ करोड १५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस वाणिज्य बैङ्कको शेयर मूल्य रू. ५ सय ४८ रहेको छ । यस कम्पनीको ३ सय २१ पटकको व्यापारमा ५७ हजार ६ सय ९० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । साथै, नेपाल लाइफ इन्स्योरन्सको रू. ३ करोड १२ लाखको शेयर कारोबार भएको छ भने अन्तिम मूल्य रू. २ हजार ३ सय ४९ पुगेको हो ।
सो दिन कारोबार रकम न्यून प्रतिशतले बढेर रू. ६७ करोड ७ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १५ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव ९३ प्रतिशत बढेर २ सय ९८ दशमलव १६ अङ्क पुगेको हो । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) न्यूट्रल जोन अथवा ४९ दशमलव ६३ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद बिक्री चाप सामान्य रहेको देखाउँछ । सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो ३ दशमलव ३२ अङ्क रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।